Myat Shu - 2012 November
You are here : Myat Shu » Archives for November 2012
စာရေးနေရင်းနဲ့ နာရီကို မော့ကြည့်တော့ မနက် ဆယ်နာရီ ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အမေက ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးနေတော့ တအိမ်လုံးက တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ။ ဒီနှုန်းအတိုင်းသာဆို နောက်တနာရီမကြာခင် သူ့စာမူပြီးသွားနိင်တယ်လို့ စာရေးဆရာ တွေးလိုက်မိတယ်။ မနေ့ကတည်းက ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး တောက်လျှောက်ရေးထားတဲ့ စာမူကို ဒီမနက်ပိုင်း အပြီးသတ် ဆက်ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး မနက်ကတည်းက စာရေးစားပွဲမှာ ထိုင်နေတာ ခုဆို အပြီးသတ် နီးနီးအထိ ရောက်လာတယ်။ ပြောရရင် ဒီစာမူက သူရေးခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် အမြန်ဆုံးပြီးတဲ့ စာမူလို့တောင် တင်စားလို့ရတယ်။ ရေးတဲ့အချိန် ဈာန်ဝင်နေတာကလည်း တကြောင်းဆိုပေမယ့် စာမူကိုက ရေးလို့သွက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုး ဖြစ်နေတော့ ခေါင်းထဲကထွက်ကျလာတဲ့ စာကြောင်းတွေကိုတောင် လက်က မှီအောင်မနဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, November 7th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
Photo: The Nature လွန်ခဲ့သော လေး၊ငါးနှစ်ဝန်းကျင်က စာပေဟောပြောပွဲခရီးစဉ်ဖြင့် နယ်မြို့ကြီးများမှအစ တောကြို၊အုံကြားအထိ ရောက်သောအခါ စာဖတ်ပရိသတ်နှင့်တွေ့တိုင်း “ ကလျာထဲက ၀တ္ထုလေးက ဘယ်လို...၊ရွှေအမြုတေထဲက ၀တ္ထုလေးကဘယ်သင်း...” ဟူသော အသံများ ကြားရစဉ်က ခံစားမှုမျိုးနှင့်တော့ မိုးနှင့်မြေပမာ ကွားခြားလှသည်။ ထိုစဉ်ကာလ ရဲသိပံ္ပတိုက်ခန်းကျဉ်းကလေးထဲ မိခင်ကြီးအပါအ၀င် မိသားစုငါးယောက် ကျပ်ကျပ်ညှပ်ညှပ်နေထိုင်ရင်း ၀တ္ထုတွေ ဟောတစ်ပုဒ်.. ဟောတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်နေတာကိုလည်း ပြန်လှန်သတိရမိသည်။ ထိုစဉ်ကာလ ရေးဖြစ်သောဝတ္ထုလေးတွေကို အမြဲမပြတ်စောင့်ဖတ်နေသော အင်းဝမြို့ဟောင်းမှ ကဗျာဆရာကြီး ကြည်အောင်က တံတားဦးသူငယ်တော်တောရတွင် တွေ့သောအခါ “ ဟား..ဟား..ဟား ဧကန္တ မင်းရည်းစားရှိနေပြီနဲ့ တူတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စိတ်၊လက်ပျော်ရွှင်မြူးတူးပြီး ၀တ္ထုတွေ တစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ရေး ဖြစ်နေတာ မဟုတ်လား။ မင်းမိန်းမခင်သော်ဇင်ကို တွေ့ရင်တိုင်ရဦးမယ်” ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, November 7th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
အမှန်ဆိုရလျှင် ညနေ သုံးနာရီဟူသော အချိန်သည် တဆိတ်တော့ ကိုးလိုးကန့်လန့်နိုင်လှသော အချိန်တခုသာ…။ ညနေ သုံးနာရီသည် တခုခုကို ပြုလုပ်ရန် အနည်းငယ် နောက်ကျနေပြီဟု တွေး၍ ရနိုင်သလို အနည်းငယ် စောနေသေးသည်ဟုလည်း တွေးနိုင်သော အချိန်လည်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ညနေ သုံးနာရီသည် ရှေ့တိုးရမလို နောက်ဆုတ်ရမလိုနှင့် မတင်မကျဖြစ်နေသော ခံစားမှုတခုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အချိန်ဟုလည်း ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်တခုအနေဖြင့် ကောက်ချက်ချ ကြည့်ချင်ပါသည်။ ညနေ သုံးနာရီ… အလုပ်နားရက်များတွင် နေ့လယ်စာ စားအပြီး အိပ်ရာပေါ်တွင် စာအုပ်တအုပ်နှင့် လှဲခွေနေရာမှ မျက်လုံးများ မှေးစင်းကာ အိပ်ချင်လာသော အချိန်သည် ညနေ သုံးနာရီ ဖြစ်သည်။ အလုပ်တက်ရသော နေ့ရက်တိုင်းတွင် အလွန်တရာ ပျင်းရိစွာဖြင့် ... Continue Reading